Mapofu Fabric Fakiti | China Mapofu Micheka Vagadziri uye Vanotengesa
ETEX Dhizaini uye inogadzira kuunganidzwa kwakakura kweVertical Blind Fabrics. Kwete isu chete tinokurudzira mafashoni uye zano pane machira, isu tinoteedzawo zvakanyanya maitiro epasi rose ekudzivirira kwehutano kune zvigadzirwa zvemachira. Vertical Blind Fabrics ndeye tsika uye yemhando mafashoni ekudzivirira emeso machira kubva yakagadzirwa mumakore mazana apfuura. fashoni iri nyore kune hwindo, nyore kushanda, nyore kupukuta. Kuona kukuru kwechiedza chakagadziridzwa uye yakakwirira fashoni yemakamuri ekushongedza. ETEX ibudise zvimwe ...
ETEX Weave Series yeJacquard Roller Blind Mapofu Machira. Yese Yarn yakaderedzwa & Peece yakaderedzwa machira. Kune anopfuura 300 magadzirirwo ejacquard mafashoni ekugadzira mumakosi edu. Kwete isu chete tinokurudzira mafashoni uye zano pane machira, isu tinoteedzawo zvakanyanya maitiro epasi rose ekudzivirira kwehutano kune zvigadzirwa zvemachira. Roller Blind Fabrics anopa kuvanzika uye kuwedzera fashoni kune chero nzvimbo. Iwedzere fashoni mune yezuva-shading indasitiri kubvira ichiwedzera yakanyanya nyore fashoni iri muhwindo, ...
ETEX Weave Series yeRoller Blind Fabrics. Kwete isu chete tinokurudzira mafashoni uye zano pane machira, isu tinoteedzawo zvakanyanya maitiro epasi rose ekudzivirira kwehutano kune zvigadzirwa zvemachira. Roller Blind Fabrics anopa kuvanzika uye kuwedzera fashoni kune chero nzvimbo. ita kunge yakawanda fashoni mune yezuva-shading indasitiri sezvo ichiwedzera yakanyanya nyore fashoni kune hwindo, nyore kushanda, nyore kupukuta. ETEX inogadzira anopfuura makumi maviri ekugadzira machira matsva uye emhando yepamusoro mafashoni. ● Kuumbwa: 100% polyes ...
ETEX Weave Series yeSunscreen Blind Fabrics. Kwete isu chete tinokurudzira mafashoni uye zano pane machira, isu tinoteedzawo zvakanyanya maitiro epasi rose ekudzivirira kwehutano kune zvigadzirwa zvemachira. Sunscreen Roller Blind Fabric inopa zvakavanzika pamwe nekujeka mabasa ekuita. ita kunge yakawanda fashoni mune yezuva-shading indasitiri sezvo ichiwedzera yakanyanya nyore fashoni kune hwindo, nyore kushanda, nyore kupukuta. ETEX inogadzira anopfuura makumi maviri ekugadzira machira matsva uye emhando yepamusoro mafashoni. ● Composi ...
Zebra machira, anonziwo machira e-combi machira, muraraungu mapofu emachira, hukuru hwekugadzira chifukidziro chewindo, inoita kuti hwindo rive rakanaka pamusoro pekutarisa. Kubva pane yakasarudzika sarudzo yekugadzira, machira eZebra anopa mhinduro dziri nani dzekushongedza kwemapofu. Kwete isu chete tinokurudzira mafashoni uye zano pane machira, isu tinoteedzawo zvakanyanya maitiro epasi rose ekudzivirira kwehutano kune zvigadzirwa zvemachira. Zebra bofu Micheka inopa kuvanzika uye kuwedzera fashoni kune chero nzvimbo. Iwedzere fashoni mukuwiswa kwezuva ...
ETEX yakaruka uye yekushandisa miunganidzwa mikuru yemachira eRoma uye yeketeni. Ese maviri akagadzirwa uye asina-akabatanidzwa machira. Machira eChiroma neketeni anoda kunyorova kweruoko pane kusindimara senge roller, zviri nyore kuti igadzirise peteni uye yakanyorovera kuturika kuita kwejira kana roman mumvuri. Zvemachira echiRoma: ● Chiumbwa: 100% polyester, machira emucheka, kana kusanganisa kusuka, huswa kuruka, machira, kotoni ● Coating: Acosterone Acid yekukwevera kana isina kubatika ● Upamhi: 140 / 280cm yakafara ● Muenzaniso :: Plain, Translucent, .. .
ETEX inogadzira dzakasiyana dzeBlackout Roller Blind Fabrics. 100% kusviba ne UV kuchengetedzwa, anti-ruzha. Iine yakakosha kuturika zvinhu uye akakwana magadzirirwo envelopu, yedu yakasviba mhando yakasimba zvakakwana kuti ikwane kune yakakwirira sunlight & yakasimba UV mamiriro ekunze, kusimba kwakasimba uye chaiyo 100% kusviba. Kwete isu chete tinokurudzira mafashoni uye zano pane machira, isu tinoteedzawo zvakanyanya maitiro epasi rose ekudzivirira kwehutano kune zvigadzirwa zvemachira. Roller Blind Fabrics anopa kuvanzika uye kuwedzera fashoni t ...